Prague saacada astronomical: sifooyinka iyo hawlgalka | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 10/01/2022 09:46 | Kala bixid
Sida aan ognahay, magaalooyin badan ayaa leh waxyaabo calaamad u ah oo gaar ah oo gaar ah. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonaa Prague saacada astronomical. Waa astaanta Prague waxayna leedahay hawlgal aad u xiiso badan. Waxa la abuuray sannadkii 1410-kii, waxaanay sheegeen in ay nasiib xumo u keenayaan marka ay shaqada joojiyaan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa sida ay u shaqeyso saacada astronomical Prague iyo qaar ka mid ah sheekooyinkeeda.
1 Saacadda xiddigiska Prague
3 Dhinacyada muhiimka ah ee saacada astronomical Prague
4 Habaar saacadda
Tani waa inaad aragto haddii aad u safraysid Prague. Saacada cirbixiyeenada ee magaaladu waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ka dambeeya, mana aha wax yar. Waxay leedahay sheeko soo jiidasho leh (iyo dhaqan) oo si fiican loogu habeyn karo sheeko ama filim. Waxaa soo bandhigay Jan Ruze 1410, waxay ku beegan tahay 605 sano ilaa iyo markaas.
Sheekadiisu, sida aan sheegay, waxay leedahay tafaasiil badan oo cajiib ah: waxay indho-tireen sayidkii wax-dhisay, iyaga oo ka horjoogsaday inuu dib u sameeyo saacad sidan oo kale ah, taas oo dadka qaarkiis ay u arkaan inay tahay mid si fiican u ilaalinaysa magaalada ... Maanta waxaan diiradda saarnay dhammaan dareenkayaga. Hawlgalka sida ay sannadadu u socdaan iyo tignoolajiyada ayaa sii socota inay soo jiidato saacad kasta oo analooga ah iyo kuwa xiiseeya nidaamyada.
Saacadda Astronomical Prague waxa ay leedahay naqshad xiddigiye leh nashqad saddex qaybood ah oo awood u leh in ay calaamadiso shan daqiiqadood isku mar. Xagga sare, inta u dhaxaysa labada xidhidh, waxaanu ku leenahay masraxa puppet ee laba iyo tobanka Rasuul. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa baxa 60kii daqiiqaba si uu u muujiyo waqtiga ay tahay. Tirooyinka ayaa ka casrisan saacadaha iyo taariikhaha laga soo bilaabo qarnigii XNUMX-aad.
Xagga hoose waxaan ku haynaa jadwal leh sawirro bilaha iyo xilliyada, oo sidoo kale tilmaamaya quduusiinta maalin kasta oo sanadka ah. Labada qayboodba waa kuwo qaali ah oo aad u xiiseeya fanka, laakiin dahabka saacaddan ayaa ku yaal jirka dhexe. Qaybtan waxaa markii hore la naqshadeeyey 1410kii.
Saacaddu waxa ay awood u leedahay in ay wakhtiga u sheegto shan siyaabood oo kala duwan, nidaamkeeda qaybaha makaanikduna waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan. Dhinaca kale, waxaan haynaa qorraxda dahabka ah ee ku wareegaysa wareegga madoobaadka, samaynta dhaqdhaqaaq elliptical ah. Qaybtani waxa ay awood u leedahay in ay na tusto saddex saacadood markiiba: booska gacmaha dahabiga ah ee tirooyinka Roomaanku waxay muujinayaan wakhtiga Prague. Marka ay gacantu ka gudubto xariiqda dahabka, waxay muujinaysaa saacadaha wakhti aan sinnayn, iyo ugu dambeyntii, giraanta dibadda, saacadaha ka dambeeya qorrax-soo-baxa marka loo eego wakhtiga Bohemian.
Marka labaad, waxay awood u leedahay inay tilmaamto wakhtiga u dhexeeya qorrax-soo-baxa iyo qorrax dhaca. In nidaam loo qaybiyey laba iyo toban "saacadood." Nidaamku wuxuu ku yaalaa fogaanta u dhaxaysa qorraxda iyo bartamaha goobta. Cabbiradu way kala duwan yihiin marka loo eego wakhtiga sanadka, maadaama aanay maalintu ahayn laba iyo toban saacadood oo iftiin ah, mana aha laba iyo toban saacadood oo habeenimo ah. Midka hore waa ka dheer yahay xagaaga iyo lidka ku ah jiilaalka. Taasi waa sababta calaamadaha xigashada loo isticmaalo in laga hadlo saacadaha saacaddan dhexe.
Saddexaad, cidhifka sare ee saacada, waxaanu ku qornaa nambarada farta dahabka ah ee Schwabacher. Waxay mas'uul ka yihiin muujinta wakhtiga, sidii aan ku samaynay Bohemia. Waxay bilaabataa in la calaamadiyo 1 duhurnimo. Giraantu waxay dhaqaaqdaa sanadka oo dhan si ay ugu beeganto wakhtiga qoraxda.
Dhinacyada muhiimka ah ee saacada astronomical Prague
Kadibna waxaan haynaa giraanta zodiac ee mas'uulka ka ah muujinta booska qorraxdu ee madoobaadka, kaas oo ah qalooca dhulku "ku wareegayo" qorraxda. Haddii aad taageere u tahay zodiac, Waxaad ogaan doontaa in sida ay u kala horreeyaan xiddigahani uu ka soo horjeedo saacadda, laakiin waxaa jirta sabab habayntan.
Nidaamka siddooyinka ayaa sabab u ah isticmaalka saadaasha stereoscopic ee diyaaradda ecliptik oo ku salaysan Cirifka Waqooyi. Waxay u ekaan kartaa wax la yaab leh, laakiin habayntani waxay sidoo kale ka jirtaa saacadaha kale ee xiddigiska.
Ugu dambeyntii, waxaan leenahay dayax muujinaya wejiyada dayax gacmeedyada dabiiciga ah. Dhaqdhaqaaqa wuxuu la mid yahay saacada master-ka, laakiin aad u dhaqso badan. Sida aad arki karto, dhammaan kuuskuus ku saabsan saacaddan astronomical waxay ku yaalaan centrosome-kan, maya, weli ma aanan samayn, sababtoo ah weli waxaa jira qaar ka mid ah kuwa kali ah.
Saacaddu waxay ka kooban tahay saxan go'an oo dhexda ku yaal iyo laba saxanno wareeg ah oo si madaxbannaan u shaqaynaya: giraanta zodiac iyo cidhifka dibadda oo ku qoran Schwabacher. Dhanka kale, waxa ay leedahay saddex gacmood: gacanta, qoraxda oo ka soo gudubta kor ilaa hoos, u dhaqma sidii gacan labaad, iyo tan saddexaad, gacan leh dhibco xiddigood oo ku xiran Burji.
Halyeygu waxa uu sheegayaa in nijaarkii abuuray 1410 kii uu qabtay shaqo aad u wanaagsan oo dadkii u xilsaaray ay rabeen in aanu ku celinayn si ay uga dhigaan mid u gaar ah adduunka, wayna indho tireen.
Aargoosi. inta uu saacada soo fuulay oo uu joojiyay qalabkiisii ​​makaaniga ahaa, isla markaas, si mucjiso ah, wadnuhu garaacii ayuu joojiyay. Wixii intaa ka dambeeyay, waxaa la rumeysan yahay in dhaqdhaqaaqa gacmihiisa iyo qoob ka ciyaarka tirooyinka ay xaqiijinayaan horumarka wanaagsan ee magaalada, iyo in saacadda shaqada joojisay ay nasiib xumo u keeni doonto Prague.
Waqti xaadirkan saacad walba waxa la daawado muqaalkan xiisaha badan oo la isku dayey in lagu dejiyo niyadda lammaanaha bilihii ay ku dhuumaalaysanayeen laamiga gadaashiisa, waxana ay arrintani ka yaabisay boqollaal qof oo farsamo-yaqaanno ah. Sababta degdega ah ama shilku waa marka kaliya ee aad samaysay Sanadkii 2002 ayay ahayd markii wabiga Vltava uu buux dhaafiyay magaaladana ay soo gaartay fatahaadii ugu weyneyd taariikhda. Haddaba markii ay saacada Jannaayo go'aansatay in ay daboosho saacadda si ay u dayactirto, waxaa dhacay nooc argagax leh (iyo niyad-jabka soo booqdayaasha) oo ka mid ah deriskeeda rumaysadka badan.
Saacaddu waxay leedahay jadwal wareeg ah oo leh bilado matalaya bilaha sanadka; laba qaybood - kan weyn, dhexda -; afar geesood oo xiddigiyayaal ah oo loo isticmaali jiray in lagu cabbiro wakhtiga qarniyadii dhexe (oo ku astaysan wakhtiga badhtamaha Yurub iyo Baabiyloon, iyo sidoo kale mawqifka xiddigaha) oo midabo kastaa uu leeyahay macne: casaan waa waaberiga iyo qorrax dhaca; madowga, habeenkii; iyo buluug, maalinta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto saacadda xidigiska Prague iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Saacadda xiddigiska Prague